La wadaag dhacdada Jacaylka mar kale waxay faa'iido u leedahay Cunnooyinka Shaagagga - Cunnada Ku Lugaha
La wadaag dhacdada Jacaylka mar labaad waxtar faa iidooyinka Cunnooyinka
Haddii aad gawaarida wax ka iibsaneyso, waxaa jira faa iido macaan oo dheeri ah oo lagu doorto Subaru. Markaad iibsanayso gaari cusub, waxaad u jeedin kartaa Subaru inuu ugu deeqo $250 Cuntada Lugaha!
Ilaa Jan.2, baabuur kasta oo cusub oo Subaru ah oo la soo iibsado ama la kiraysto, Subaru wuxuu ugu deeqayaa $250 xulashada macaamiisha ee hay'adaha samafalka ee ka qeyb qaadanaya Meals on Wheels waa mid ka mid ah afarta hay'adood ee samafalka ee kaqeyb galaya waana tan iyo markii la bilaabay dhacdada.
Haddii aad ka fikireyso gaari cusub, ama aad taqaanno qof kale, fadlan iska hubi Subaru Wadaag Dhacdadii Jacaylka si aad waxbadan uga barato. Hubina inaad dooratid Cunnooyinka Wheels sida sadaqadda aad dooratay markaad dhammayso iibsigaaga!
Diisambar 1, 2019